China iimbasa IMBONISELO mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Ngeziganeko ezininzi zoLwazi kunye nemfuno yeeMbasa ezinxulumene nabaxhasi bezemali ezinxulumene nezihloko ezininzi, sazise umgca weendebe zeribhoni zokwazisa kunye neembasa. Ezi zinokusetyenziswa kuyo nayiphi na iikiti zethu zeNdalo iphela kwaye siyawathengisa amanani ngokwahlukeneyo. Sikwabonelela ngeekiti zethu zokuthatha inxaxheba eziqwalaselweyo zinemibala emitsha yendebe.
Nokuba kungasiphi na isizathu okanye ukugula isiganeko sakho sinokuba sesakho, qaphela amabhaso ethu okwazisa kunye neembasa. Ezi mbasa zineeribhoni zikulungele ukwazisa umhlaza okanye ulwazi ngezinye izifo okanye izizathu. Amabhaso okwazisa ngomhlaza ngokwesiko anokuprintwa ngemibala emininzi ebonisa umbala wakho weeribhoni ofanelekileyo kunye nesizathu. Ilungele imidyarho kunye neminye iminyhadala yeembaleki, yenza ngokwezifiso iimedali zakho zokwazisa ngesicatshulwa esenzelwe wena. Sitsalele umnxeba ukuba imibala yakho ayichazwanga njengokhetho kwaye siza kuyenza isebenze. Cofa kwimedali yomdyarho wolwazi ukujonga izaphulelo zobungakanani.
Amabhaso eRibbon yoKwazisa ngeRibhoni abonisa iribhoni ekukhetheni kwakho imibala. Iiribhoni zoLwazi zihlala zinxulunyaniswa nokwazisa ulwazi ngezizathu ezahlukeneyo. La mabhaso mhle ukubulela umnikeli okanye umcwangcisi wombutho wakho wesisa okanye ukunika abo baphumeleleyo kumsitho.
Egqithileyo Impumelelo yeembasa
Okulandelayo: IIMBALI ZEBHAYIBHILE